Menaka «amande douce », azo hanadiovana tarehy isan’andro
Na nanao haingon-tava na tsia dia tokony hodiovina foana ny tarehy isaky ny hariva mialoha ny hatory sy amin’ny maraina. Io ilay antsoina hoe “démaquillage”.
Manala kentrona amin’ny tantely…izao atao
Misy karazany 4 ireo fomba azo atao hanalana tsikelikely ny kentrona eo amin’ny tarehy amin’ny alalan’ny tantely.
Te hanao « faux ongles », matihanina ihany atonina!
Teknika iray hikarakarana ny hoho sy entina hampaniriana azy ny fametahana « faux ongles ».
Ny tokony ho fikoloana tongotra, ao an-trano
Raha karazan’ireny olona tia mikarakara vatana amin’ny akora natoraly ao an-trano ireny ianao dia azonao andramana ity “gommage” ho an’ny tongotra ity.
Manarina ny hodi-tava reraka
Vao vizana, na tsy dia natory tsara, dia hita avy hatrany eny amin’ny tarehy ny vokany. Raha hamonjy lanonana na hanatrika fotoan-dehibe kanefa sendra izany havizanana izany, dia hanavotra anao ireto paipaika ireto :
Mamotsy helika amin’ny citron, yaourt, karibaonetra …
Rehefa miandrona eo amin’ny helika ny sela maty dia lasa mivalomainty ny hoditra. Ratsy anefa ny mahita ny lokony miavaka be tahaka izany.
Otra manala kentrona sy mampihenjana ny hodi-tava
Fantatrao ve fa mitondra vahaolana maro amin’ny fikoloana ny hatsaran-tarehy ny otra ? Ity iray ity izao dia manala havizanana sady misoroka ny fipoiran’ny kentrona izay maha-antitra ny tarehy :
Tsy tahaka ny fiasan’ny « cire » ny fiasan’ny « crème dépilatoire ». Tsy misintona an’ilay volo hatrany amin’ny fakany ao anaty hoditra mantsy ny « crème » fa mampitsonika azy sy manendaka azy mora foana mandritra ny minitra vitsy noho ireo singana Soufre ao anatiny . Miasa amin’ireo Keratine amin’ny tahom-bolo izy noho izany. Tsy misahirana sy mandany fotoana araka izany ny fampiasana azy fa ahosotra ilay akora, avela hiasa dia esorina avy eo.
Ahoana ny fampiasana azy ?
Ahosotra eo amin’ny hoditra maina ilay « crème dépilatoire ». Avela hipetraka eo mandritra ny minitra vitsy izay efa voatondro eo amin’ilay fonosana misy azy, mba hiasa amin’ireo volo. Ao aorian’izay dia esorina amin’ny alalan’izay fitaovana efa miaraka aminy, na amin’ny « gant de toilette » madio fotsiny ireo « crème ». Kobanina amin’ny rano mangatsiaka. Hamandinina amin’ny « lait hydratant » na akora fanosotra ao aorian’ny fanalana volo. Fadiana ny mampiasa akora maherisetra na misy alikaola. Raha mahatsiaro mahamaivay kosa eo amin’ny hoditra dia hamarino fa mety tsy nanaraka an’ilay fe-potoana nandomanana azy izay, ny namelanao azy teo ka kobano avy hatrany.
Tombony lehibe azo amin’ny fampiasana ny « crème dépilatoire » ny tsy fandrenesana fanaintainana rehefa manala volo aminy, toy izay mitranga amin’ny fampiasana “cire”. Maharitra ela vao mitsiry indray ireo volo fa tsy toy ny avy nampiasana hareza, ary malandina tsara foana ny hoditra. Tsy miha-matevina na miova kalitao koa ny volo rehefa maniry. Raha telo andro no maniry ny volo nesorina tamin’ny hareza dia any amin’ny 10 andro na mahery any ho any vao mitsiry ny volo nesorina tamin’ny “crème depilatoire”.
Mety tsy ho zakan’ny hoditra
Arakaraky ny sokajin-koditra ny “crème dépilatoire” mifandraika aminy. Izany hoe, tsy voatery ho zakan’ny hafa, ny « crème » fampiasanao. Tsy maintsy jerena mba hifanaraka amin’ny sokajin-koditra izy noho izany. Ankoatra izay, mety hahery setra amin’ny hoditra koa izy itony : raha vao mahare mahamaivay na mangidihidy dia aleo kobanina avy hatrany.